ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ လာမည့် ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစားခွင့် ရဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကို ပြောသွားခဲ့တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရေ့ - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ လာမည့် ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစားခွင့် ရဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကို ပြောသွားခဲ့တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရေ့
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကွင်းလယ်လူဟောင်း အိုဝင်ဟားဂရေ့က ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ သရဲနီ နဲ့ ဂန်းနား တို့အတွက် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစားခွင့် ရဖို့ တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အိုဝင်ဟားဂရေ့က မန်ယူနိုက်တက်ကော အာဆင်နယ် အသင်းတို့ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ Top4၀င်ရောက် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းကလည်း အဆင့် ၆ နဲ့ အဆင့် ၅ နေရာ တွေနဲ့သာ ရာသီသိမ်း ခဲ့တာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့် နဲ့ လွဲချော်ကာ ယူရိုပါလိဂ် မှာသာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ၅ ပွဲ အပြီးမှာလည်း ၂ သင်းစလုံးဟာ နိုင်ပွဲ ၂ပွဲ စီသာ ရရှိ ထားခဲ့ ကြပြီး ရမှတ် ၈ မှတ်စီ ပိုင်ဆိုင် ထားကြကာ Top4၀င်ဖို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေ မပြ ထားနိုင် ခဲ့ကြပါဘူး။
သို့ပေမယ့်လည်း ဟားဂရေ့က အာဆင်နယ် ၊ မန်ယူနိုက်တက် တို့ အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပြည်တွင်းလိဂ်က အခြေအနေထက် တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ မယူဆ ထားခဲ့ ပါဘူး။ အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူဟောင်းက ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ နှစ်သင်းစလုံး အတွက် အရမ်းကို အရေးပါတယ်လို့ ယုံကြည် နေပြီး ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲအောင် လုပ်ခြင်း ကသာ ၎င်းတို့ အတွက် တစ်ခုတည်းသော ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ပေါက် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
အိုဝင်ဟားဂရေ့ က “ကျွန်တော် ကတော့ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ နှစ်သင်းစလုံး အတွက် ကြီးကြီးမားမား အရေး ပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လက်ရှိ ခြေစွမ်း ၊ အနေအထား အရ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ လီဗာပူး ၊ မန်ချက်စတာစီးတီး တို့ နောက်မှာ ကျန်ခဲ့ ပါပြီ။ ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲဟာ နှစ်သင်းစလုံး အတွက် ဗိုလ်စွဲဖို့ အရမ်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒါဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အတွက် တစ်ခု တည်းသော လမ်းကြောင်းပါ။
လက်ရှိ ကစား နေတဲ့ ခြေစွမ်း အရ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ထိပ်ဆုံး လေးသင်း ၀င်မယ်လို့ ကျွန်တော် မမြင် မိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းကြောင်း ကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲ ပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အတွက် ၊ အသင်းရဲ့ လူငယ် ကစားသမားလေးတွေ အတွက် စဉ်းစား ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ အသင်းလေး တွေနဲ့ ကစား ရတဲ့ အထူး အခွင့်အရေး တစ်ခုပါ။
အာဆင်နယ် အတွက် ဆိုရင်လည်း လက်ရှိ သူတို့ အသင်း ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစားသမား အင်အား အရ ဂန်းနား တို့ အနေနဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ နည်းလမ်း ရှာတွေ့ နိုင်မှာလား ? သူတို့ဟာ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အတောင့်တင်းဆုံး အသင်းတွေ ထဲက တစ်သင်း ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ယူရိုပါလိဂ် ဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း ဖိုင်နယ်မှာ ချဲလ်ဆီး ကို ၄ – ၁ နဲ့ ရှုံးကာ ဒုတိယ နေရာသာ ရရှိ ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့်နဲ့ လွဲချော် ခဲ့ပါတယ်။ ဂန်းနား တို့ဟာ ဒီရာသီ အုပ်စု အဆင့်မှာ စတန်းဒက်လိဂ် ၊ ဗစ်တိုးရီးယား ၊ ဖရန့်ဖတ် တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ နေပြီး မနေ့ညကတော့ အုပ်စုတွင်း အဓိက ပြိုင်ဘက် ဖရန့်ဖတ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ၃ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစား ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် ကလည်း ဒီရာသီ အုပ်စု အဆင့်မှာ အက်စ်တာနာ ၊ ပါတီဇန်ဘဲလ်ဂရိတ် ၊ အယ်ခမာ တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ နေပြီး မနေ့ညက အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ အက်စ်တာနာ ကို ၁-၀ နဲ့ နိုင်ကာ အနိုင် ၃ မှတ်နဲ့ စတင် ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျတို့ လာမညျ့ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲ ကစားခှငျ့ ရဖို့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးကို ပွောသှားခဲ့တဲ့ အိုဝငျဟားဂရေ့
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ ကှငျးလယျလူဟောငျး အိုဝငျဟားဂရကေ့ ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲဟာ သရဲနီ နဲ့ ဂနျးနား တို့အတှကျ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲ ကစားခှငျ့ ရဖို့ တဈခုတညျးသော လမျးကွောငျး ဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။ အိုဝငျဟားဂရကေ့ မနျယူနိုကျတကျကော အာဆငျနယျ အသငျးတို့ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ Top4၀ငျရောကျ နိုငျလိမျ့မယျလို့ မထငျ ထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျ တို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုနျးကလညျး အဆငျ့ ၆ နဲ့ အဆငျ့ ၅ နရော တှနေဲ့သာ ရာသီသိမျး ခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျခှငျ့ နဲ့ လှဲခြျောကာ ယူရိုပါလိဂျ မှာသာ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ၅ ပှဲ အပွီးမှာလညျး ၂ သငျးစလုံးဟာ နိုငျပှဲ ၂ပှဲ စီသာ ရရှိ ထားခဲ့ ကွပွီး ရမှတျ ၈ မှတျစီ ပိုငျဆိုငျ ထားကွကာ Top4၀ငျဖို့ အတှကျ လုံလောကျတဲ့ ခွစှေမျးတှေ မပွ ထားနိုငျ ခဲ့ကွပါဘူး။
သို့ပမေယျ့လညျး ဟားဂရကေ့ အာဆငျနယျ ၊ မနျယူနိုကျတကျ တို့ အနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပွညျတှငျးလိဂျက အခွအေနထေကျ တိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျ လိမျ့မယျလို့ မယူဆ ထားခဲ့ ပါဘူး။ အင်ျဂလနျ ကှငျးလယျလူဟောငျးက ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲဟာ နှဈသငျးစလုံး အတှကျ အရမျးကို အရေးပါတယျလို့ ယုံကွညျ နပွေီး ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲအောငျ လုပျခွငျး ကသာ ၎င်းငျးတို့ အတှကျ တဈခုတညျးသော ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျပေါကျ ဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
အိုဝငျဟားဂရေ့ က “ကြှနျတျော ကတော့ ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲဟာ နှဈသငျးစလုံး အတှကျ ကွီးကွီးမားမား အရေး ပါတယျလို့ ထငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ လကျရှိ ခွစှေမျး ၊ အနအေထား အရ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ လီဗာပူး ၊ မနျခကျြစတာစီးတီး တို့ နောကျမှာ ကနျြခဲ့ ပါပွီ။ ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲဟာ နှဈသငျးစလုံး အတှကျ ဗိုလျစှဲဖို့ အရမျး အရေးကွီး ပါတယျ။ ဒါဟာ ခနျြပီယံလိဂျ အတှကျ တဈခု တညျးသော လမျးကွောငျးပါ။
လကျရှိ ကစား နတေဲ့ ခွစှေမျး အရ နှဈသငျးစလုံးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ထိပျဆုံး လေးသငျး ၀ငျမယျလို့ ကြှနျတျော မမွငျ မိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲ အတှကျ အကောငျးဆုံး လမျးကွောငျး ကတော့ ဒီပွိုငျပှဲ ပဲလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ အတှကျ ၊ အသငျးရဲ့ လူငယျ ကစားသမားလေးတှေ အတှကျ စဉျးစား ကွညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ ဒါဟာ အသငျးလေး တှနေဲ့ ကစား ရတဲ့ အထူး အခှငျ့အရေး တဈခုပါ။
အာဆငျနယျ အတှကျ ဆိုရငျလညျး လကျရှိ သူတို့ အသငျး ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ကစားသမား အငျအား အရ ဂနျးနား တို့ အနနေဲ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ နညျးလမျး ရှာတှေ့ နိုငျမှာလား ? သူတို့ဟာ ဒီပွိုငျပှဲရဲ့ အတောငျ့တငျးဆုံး အသငျးတှေ ထဲက တဈသငျး ဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ယူရိုပါလိဂျ ဖိုငျနယျကို တကျရောကျ နိုငျခဲ့ ပမေယျ့လညျး ဖျိုငျနယျမှာ ခြဲလျဆီး ကို ၄ – ၁ နဲ့ ရှုံးကာ ဒုတိယ နရောသာ ရရှိ ခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျခှငျ့နဲ့ လှဲခြျော ခဲ့ပါတယျ။ ဂနျးနား တို့ဟာ ဒီရာသီ အုပျစု အဆငျ့မှာ စတနျးဒကျလိဂျ ၊ ဗဈတိုးရီးယား ၊ ဖရနျ့ဖတျ တို့နဲ့ တှဆေုံ့ နပွေီး မနညေ့ကတော့ အုပျစုတှငျး အဓိက ပွိုငျဘကျ ဖရနျ့ဖတျကို အဝေးကှငျးမှာ ၃ – ၀ နဲ့ အနိုငျ ကစား ခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ ကလညျး ဒီရာသီ အုပျစု အဆငျ့မှာ အကျဈတာနာ ၊ ပါတီဇနျဘဲလျဂရိတျ ၊ အယျခမာ တို့နဲ့ တှဆေုံ့ နပွေီး မနညေ့က အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ အကျဈတာနာ ကို ၁-၀ နဲ့ နိုငျကာ အနိုငျ ၃ မှတျနဲ့ စတငျ ခဲ့ပါတယျ။